Global Voices teny Malagasy » Dingana Ataon’ny Fitondrana Shinoa Mba Hanalàna Baràka Ilay Mpikatroka Ho An’ny Zon’ny Olom-Pirenena Voafonja · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Jona 2015 18:50 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Na eo aza ny tsy fisian’ny fifandraisana mafy orina aminà vondron’ny olom-pirenena manokana na sehatra ety anaty tranonkala, lasa fanta-daza amin’ny faribolan’ny zon’olombelona any Shina i Wu nanomboka ny taona 2009. Misalotra ny anaram-bositra “Butcher” ilay ranamana 42 taona. Nanazava i Ge Wenxiu, mpisolovava an’i Wu, raha niteny tao amin’ny Biloagy Sinosphere an'ny New York Times , fa ny anarana dia natao hanesoana ny fampiasàn’ireo manampahefam-panjakana fomba ratsy miaraka amin’ny soso-kevitra feno eso fa tiany “hovonoina” izy ireo noho ny kolikoly sy ny fitondrantena ratsiny.
Nandritry ny andro vitsy lasa, nandrakotra ny fisamborana an’i Wu ny media fehezin’ny fanjakana, miaraka amin’ny fitongilanana tanteraka amin’ny fanamelohana azy. Ny 25 May, nampiasa sary  avy amin’ny fakantsarin’ny fiarovana teo ivelan’ny Fitsarana Avom-Bahoaka tao Jiangxi ny China Central Television (CCTV) ho porofon'ny fitondrantena mikorontana nataon’i Wu. Telo andro taty aoriana, naseho n'ny People's Daily, gazety mpiseho isan’andro an’ny antoko kaominista ho toy ny nisara-bady tsy tomponandraikitra, mpankorontana sy mpisoloky i Wu ary mpanao heloka bevava koa ny rainy sy ny rahalahiny. Nanondro olom-pantatr'i Wu tsy voatonona anarana ilay tatitra, ka mihevitra fa ny hafanàm-po ara-tsosialy ataony dia nentanin’ny tombontsoa manokana.
Wu dia tao anatin'ny vondrona voalohan'ireo mpampiasa aterineto mba hanohitra ny fanadihadihana nampiady hevitra nataon’ny pôlisy tamin’i Deng Yujiao , mpandroso sakafo izay nanindrona antsy sy nahafaty manampahefana tao amin’ny governemanta taorian'ny saika hanereny azy hanao firaisana taminy. Wu aza dia nandeha mihitsy niala tao Beijing nankany Hubei mba hamangy an’i Deng ary handresy lahatra ny fianakaviany hitady vonjy amin‘ny mpisolovava avy ao Beijng mba hampiakatra fitsarana ambony. Tamin’ny farany, voampanga ho nanao “fiarovan-tena ara-dalàna be loatra” i Deng, nefa afa-niala tamin’ny sazy heloka be vava noho ny sàtany ara-tsaina. Noheverina ho toy ny fahombiazana lehibe ho an’ny hafanàm-po amin’ny tranonkala any Shina iny raharaha iny.
Nanomboka tamin’izay, nanohy nanampy ny olon-tsotra amin’ny fiarovana ny zony i Wu. Vao haingana izy no tafiditra tamin’ny raharaha fitifirana nahafaty lehilahy iray  nataon’ny pôlisy tao amin’ny fiantsonam-piarandalamby tao Qing’an. Namorona ekipan’olom-pirenena mpanao fanadihadiana izy ary nitaky ny hamoahan’ny polisin’ny lalamby ny horonantsary tamin’ny fakantsary fanaraha-maso ao amin’ilay fiantsonana mba ho hitam-bahoaka.
Voalohany izao no nahitako mpitondra mampiasa fahefam-panjakana maro, anisan’izany ny CCTV, Xinhua ary ny Gazety miseho isan’andron’i Shina [eo ambany fibaikoan’ny mpitondra isan-karazany ireo media telo ireo: ny antoko kaominista, ny governemanta ary ny manampahefana momba ny fampielezan-kevitra] mba hamorona tantara hamelezana ilay mpikatroky ny zo ifotony “Boucher Wu Gan”. Tsy nahazo izany karazana famelezana izany, na i Liu Xiaobo  [gadra politika] tamin’ny fotoan’androny aza. Matetika ny fanjakana tsy refesi-mandidy no mampiasa ny media mba hamaizana ny olona amin'ny fomba tsy vitan'ny lalàna atao. Hovainy ho mainty ny fotsy ary haratsiany ny fitsaràna. Fitaovana iray ho entina manatsara fiarahamonina ny hetsika fikatrohana ho an'ny zo. Tokony hànana olona maromaro toa an'i Wu Gan isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/22/70607/
 Biloagy Sinosphere an'ny New York Times: http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2015/05/29/police-detain-wu-gan-chinese-activist-known-as-super-vulgar-butcher/?_r=0
 nampiasa sary: http://m.news.cntv.cn/2015/05/25/ARTI1432522524740739.shtml
 Deng Yujiao: https://globalvoicesonline.org/2009/05/17/china-netizens-stand-with-the-waitress-who-killed-an-official/
 fitifirana nahafaty lehilahy iray: https://globalvoicesonline.org/2015/05/21/police-shoot-a-man-dead-justified-force-or-chinas-stability-maintenance-at-work/